နာရေးကူညီမှုအသင်း နှင့် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၏ ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နာရေးကူညီမှုအသင်း နှင့် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၏ ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ
၁. ၅. ၂၀၁၀ ရက်နေ့ မေဒေးနေ့ အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်ပေမယ့် အပြင်ထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ မနက်ပိုင်း အိမ်တက်ဖိတ်တဲ့ဆီကို အရင်ဝင်ပြီးနောက် အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ရဲ့ ၂ နှစ်ပြည့် ကုသိုလ်လုပ်မယ်လို့ ဖုန်းဆက်လာတဲ့အတွက် ဘယ်မှာလှူမှာလဲ မေးတော့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ လူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မြောက်ဥက္ကလာအ၀ိုင်းထိပ်က မဟာနွေမှာ လူစုမယ် အရောက်လာခဲ့ပါလို့ အသင်းက မောင်ပုရ်ှလေးက ပြောတဲ့အတွက် သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်က ၁၁ နာရီဆိုလို့ အမှီသွားတော့ လူစုံနေတာနဲ့ ခဏနေတော့ နာရေးကူညီမှုအသင်းတည်ရှိရာနေရာကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ နောက် အလှူငွေကို လက်ခံမယ့် ဦးကျော်သူက စာရေးပြီး လက်မှတ်ကိုလည်း တစ်ခါထဲလက်ခံပါတယ်။ နောက် နာရေးကူညီမှုအပြင် သုခကုသိုလ်ဆိုတဲ့ ဆေးခန်းလည်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက် ဆေးခန်းတွေ လိုက်လံပြသပေးပါတယ်။ နောက် ထပ်မံသိရတာက မည်သူမဆို ပရဟိတအနေနဲ့ လာရောက် ကုသိုလ်ပြုနိုင်ကြောင်း ကလေးတွေလည်း စာသင်ပေးသေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကလည်း ထည်ဝါစွာ တည်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့
သေရေးကိစ္စကို အကူအညီပေးခဲ့ကြသကဲ့သို့ ရှင်သူအတွက်လည်း တတ်စွမ်းသမျှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီလိုကြပါသဖြင့် (ပထမ) နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် ဆေးကူညီမှု ကော်မတီကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းကာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၇) ရက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့မှစ၍ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပ မိခင်နှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး၊ အင်းစိန်ဆေးရုံကြီး၊ စံပြဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း(ဂန္ဓီ)ဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း(ကြည့်မြင့်တိုင်)ဆေးရုံကြီး စသည့် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (၆) ရုံတွင်….
အမှတ်(၁၃ – က)၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊
ရုံးချုပ်ဖုန်း – ၇၀၉၂၇၇၊ ၇၂၈၀၈၉၊ ၅၈၁၃၆၃၊ ၅၈၀၁၃၃
ရေဝေးရုံးခွဲ – ၇၀၄၇၈၄၊ ၆၃၉၄၉၀၊ ၀၉၈၆၄၀၂၁၉
ကျွန်တော်တို့လဲ ဆရာတော် ဦးဇ၀န (မေတ္တာရှင်)ရွှေပြည်သာ ရဲ့တရားတော်တွေနာပြီး
သိတ်မွန်မြတ်တဲ့အလှူပါခင်ဗျာ… ကျွန်တော်နဲ့ အတူ သူငယ်ချင်းတွေလည်း နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်… သူငယ်ချင်းတို့လည်း အချိန်ရမယ်…. ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူ ပါဝင်ကူညီကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
ကျေးဇူးပါရှင် ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေရတာ အလွန်ပဲ ကျေနပ်မှုကောင်းလှပါတယ်။